Vaovao - Famakafakana ny bateria lithium sy ny indostrian'ny fiara vaovao
Ao anatin'ny sehatry ny fivoaran'ny fiara mpitondra angovo vaovao, fiara elektrika 2.2 tapitrisa no amidy eran-tany tamin'ny taona 2019, fiakarana 14,5% isan-taona, nahitana 2.5% ny totalin'ny varotra fiara. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny resaka varotra fiara angovo vaovao, ny BYD dia laharana faharoa avy amin'i Tesla. Tao anatin'ny 19 taona, Tesla dia nivarotra fiara mpamaky herinaratra 367820, laharana voalohany manerantany, mitentina 16,6% amin'ny fitambaran'izao tontolo izao.
Sina no mpamokatra sy mpamokatra fiara mpitondra angovo vaovao lehibe indrindra manerantany. Tamin'ny taona 2019, nampihena ny fanampiana ho an'ny fiara mifono angovo vaovao i Sina. Ny habetsaky ny varotra fiaran'ny angovo vaovao dia 1,206 tapitrisa, nihena 4% isan-taona, mitentina 4,68% amin'ny fitambaran'izao tontolo izao. Anisan'izany, misy fiara elektrika 972000 sy fiara mifangaro plug-in 232000.
Ny fampandrosoana mahery vaika ny angovo fiara vaovao manerantany dia nampiroborobo ny fampiroboroboana ny indostrian'ny bateria lithium-ion. Ny haben'ny fandefasana ny bateria lithium-ion dia nitombo 16,6% raha oharina tamin'ny tamin'ny taona lasa, ka hatramin'ny 116.6gwh tamin'ny taona 2019.
Tamin'ny taona 2019, batterie lithium 62.28gwh no napetraka tany Shina, tafakatra 9.3% isan-taona. Raha heverina fa 5.9 tapitrisa ny vokatry ny fiaran'ny angovo vaovao amin'ny 2025, dia hahatratra 330.6gwh ny fangatahana bateria herinaratra ary hitombo 32,1% ny CAGR raha 62,28gwh amin'ny taona 2019.
Battery bateria azo averina 12v Lithium, Kitapo bateria Lithium azo haverina 12 Volt, Li Battery, 18650 Nimh, Lithium Ion Polymer Battery, 3.7 bateria azo haverina, Vokatra rehetra